अमेरिकासँग वार्ता सुरु गर्न उत्तर कोरिया तयार
२०७६ भदौ २५ बुधबार ११:०४:००
उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी वार्ता सुचारु गर्न तयार रहेको जनाएको छ । दुवै पक्षको सहमति भए अमेरिकासँग बृहत् वार्ता गर्न उत्तर कोरिया तयार रहेको उत्तरले जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले उत्तरसँगको वार्ता सुचारु गर्न अमेरिका तयार रहेको संकेत गरिरहेकै वेला प्योङयाङको यस्तो भनाइ आएको हो ।
कोरियाली प्रायद्वीपलाई पूर्ण रूपमा निःशस्त्र बनाउने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच गत वर्ष सिंगापुरमा शिखर वार्ता भएको थियो । तर, उत्तरलाई कसरी निःशस्त्रीकरण गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष अन्योलमा छन् । त्यस्तै यसै वर्षको फेब्रुअरीमा हनोईमा भएको दोस्रो शिखर सम्मेलनमा पनि निःशस्त्रीकरणबारे अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच वार्ता भएको थियो ।
वार्ता गर्न ट्रम्प इच्छुक
किमसँग वार्ता गर्न ट्रम्प इच्छुक देखिएका छन् । ‘उत्तर कोरियाली नेता किम जोङसँग मेरो सुमधुर सम्बन्ध छ,’ ह्वाइटहाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा ट्रम्पले भने । उत्तरसँगको वार्तालाई आफूले जहिले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । ‘मैले सदैव भन्दै आएको छु कि उत्तरसँग वार्ता हुनु सकारात्मक पक्ष हो । मलाई आशा छ, उत्तरसँग वार्ता हुन्छ ।’
उत्तर कोरियाका पछिल्ला आणविक गतिविधिप्रति अमेरिका असन्तुष्ट रहेको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताए । ‘उत्तरले तत्कालै आफ्ना आणविक गतिविधि रोक्नुपर्छ । तर, हाम्रो मिसन प्रस्ट छ– फेरि पनि वार्ताको टेबुलमा बसेर समस्याको समाधान गरौँ,’ उनले भने । उत्तरका पछिल्ला आणविक गतिविधिबारे अमेरिकाले गहिरो चासो देखाएको छ । ‘उत्तरको प्रहारबारे हामीले निरन्तर अनुगमन गरेका छौँ र यस क्षेत्रका सहकर्मीसँग छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने ।
उत्तरले दुईवटा साना क्षेप्यास्त्र पूर्वी कोरियाली द्वीपमा परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ । अमेरिकासँग वार्ताका लागि आह्वान गरेको केही घन्टा नबित्दै उत्तरले नयाँ मिसाइल समुद्री तटतर्फ प्रहार गरेको हो । पछिल्ला महिना उत्तर कोरियाले शृंखलाबद्ध रूपमा मिसाइल प्रहार गरिरहेको छ ।
दक्षिण कोरियाली सेनाका अधिकारीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान ७ बजे समुद्रमा दुईवटा मिसाइल प्रहार गरिएको थियो ।
उत्तर कोरियाले मंगलबार प्रहार गरेको सीमित क्षमताका दुईवटा क्षेप्यास्त्र करिब ३३० किलोमिटर टाढा कोरियाली समुद्रमा खसेका थिए । यी क्षेप्यास्त्र राजधानी प्योङयाङको बाहिर फ्यानगानबाट प्रहार गरिएका थिए ।
दक्षिण कोरियाली सेनाले यी हतियार ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र वा रकेट आर्टिलरी हो भन्ने स्पष्ट नभएको जनाएको छ । गत जुलाईदेखि यो आठौँ परीक्षण हो । यसअघि प्रहार गरिएका हतियार छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र र रकेट थिए । विज्ञहरूका अनुसार यी हतियार अमेरिकी सैनिक अखडासहित दक्षिण कोरियाका कुनै पनि स्थानमा प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका छन् ।
के भन्यो उत्तर कोरियाले ?
उत्तर कोरियाकी विदेशमन्त्री चोई सोन हुईले उत्तर कोरिया तोकिएको समय र स्थानमा यही सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकासँग फेस टु फेस वार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताइन् । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको सम्झौतालाई जीवितै राख्न उनले वासिंटनलाई नयाँ दृष्टिकोण लिएर आउन आग्रह गरिन् ।
‘मलाई विश्वास छ दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने ढंगले अमेरिकाले एउटा नयाँ प्रस्ताव लिएर आउनेछ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । यसअघि उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध रोक्न अमेरिकाले अस्वीकार गरेपछि हनोई वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
गत जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दुई कोरियालाई छुट्याउने निःशस्त्र क्षेत्र (डिएमजेड) मा ऐतिहासिक वार्ता भएको थियो । सो क्रममा ट्रम्पले उत्तरको भूमिमा पाइलासमेत टेकेका थिए । दुवैजनाले भविष्यमा वार्ता गर्न सहमति जनाएका थिए, तथापि अहिलेसम्म वार्ताका लागि औपचारिक तयारी हुन सकेको छैन ।
#उत्तर कोरिया # किम जोङ # ट्रम्प
डाभोसमा ट्रम्प र खानबीच भेटवार्ता : कस्मिरबारे मध्यस्थता गर्न ट्रम्प तयार
ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया सुरु
नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता, उत्तर कोरियाली कामदार पनि स्वदेश फर्किए
इरानी सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, ट्रम्प गरे खुलेर प्रशंसा
अमेरिकी संसदले खुम्च्यायो ट्रम्पको युद्धाधिकार !
अमेरिकालाई हानी गरे इरानमाथि थप नाकाबन्दी : राष्ट्रपति ट्रम्प
तेल चोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै हवाई इन्धन ट्यांकरचालकद्वारा ढुवानी ठप्प
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा नेविसंघका दुई पक्षबीच झडप (भिडियाेसहित)
इटहरीका मेयर द्वारिकलालले हटाए १२ कर्मचारी, भन्छन् - संघले पठाउँदै गर्छ, हामी हटाउँदै गर्छाैं
व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति रोक्का
ए डिभिजन लिग : मच्छिन्द्रको जितमा थ्री स्टार उपाधिहोडबाट बाहिरियो
विप्लव माओवादीका दुईजना नेता रौतहटबाट पक्राउ
ज्ञान निकेतन बास्केटबल आज
श्रीलंकाली थरंगाले ललितपुरबाट खेल्ने
कहालीलाग्दो बनाउन सक्छ कोरोना भाइरसले
अर्जेन्टिनामा नयाँ इभिटाको उदय